Useveze isizathu esenze walidayisa iqembu uMulaudzi weTTM - Impempe
Useveze isizathu esenze walidayisa iqembu uMulaudzi weTTM
UMasala Mulaudzi obengumnikazi weTTM oseshiye phansi ebholeni
Ukubhobokelwa yiphakethe ngenxa yezindleko zokuphatha iqembu lebhola, aze agcine esesebenzisa nemali abeyibekela ikusasa lezingane zakhe yisona sizathu esikhulu esenze usihlalo weTshakhuma Tsha Madzivhandila, uMasala Mulaudzi aqoke ukulifaka endalini.
Ukudayiswa kweTTM kuqinisekiswe yiPremier Soccer League (PSL) NgoLwesihlanu, ngesikhathi imemezela ukuthi isigungu sayo esiphezulu sikugunyazile ukudayiselana phakathi kukaMulaudzi noDr Abram Sello ongusomabhizinisi wasePolokwane.
UMulaudzi ukhale ngokuthi kukhona abangakaze vele bamfisele okuhle kusuka ethenga isitifiketi seBidVest Wits sokudlala kwiDStv Premiership. Ekhuluma nesiteshi somsakazo esingaphansi kweSABC esiseLimpopo, iPhalaphala FM, uMulaudzi uqale ngokuxolisa kubalandeli njengoba iqembu selizosuka eVenda, liye ePolokwane.
“Kuqala nje, ngifuna ukuxolisa kulabo abaphoxekile ngesinqumo esisithathile… Sagxekwa kakhulu ngesikhathi sithenga isitifiketi seWits qede sayithuthela eVenda, futhi lokho kwakwenziwa abantu abanomona, besihleka ngokuthenga iWits,” kusho uMulaudzi.
“Angazi babehloseni ngalokhu, kodwa ngabantu abangeke baze bakukhone ukuthenga iqembu ababesigxeka. Nokho bakhona nababeseseka…”
Uthe izinkinga beziya ngokwanda kunokuba zixazululeke, wabona ukuthi uzogcina esewulopholo uma eqhubeka naleli qembu.
“Izinselelo ebesibhekene nazo bese ziqala ukuba ngaphezu kwamandla, futhi bese kungcoliseka negama lami, kanti ibhola yinto nje ebengiyenza eceleni.
“Sibonile ukuthi sekuyasinda kakhulu, sabona ukuthi mhlambe ibhola akuyona into yethu ngoba besingene ntshi ezinkingeni ngenxa yokuthi nganika abantu bangasekhaya ukuthi kube yibo abaphatha iqembu. Lokhu kubasindile ngoba bebengenamava ale misebenzi abebeyenza, sagcina sesinenzinkinga zemali ngaze ngagcina sengithatha ezimalini ebengizibekele umndeni wami,” kuchaza uMulaudzi.
“Sibe sesihlala phansi ngamaholidi kaKhisimuzi singumndeni savumelana ukuthi iqembu lisidla kakhulu emalini ngemuva kokubheka ukuthi sasime kanjani ngesikhathi sithenga iWits nalapho sesikhona manje, sathola ukuthi sesisebenzise ngaphezu kukaR60-million uma usihlanganisa nemali esayikhokha sithenga iWits.
“Sibone lapho ke ukuthi ciche ibhola akulona ibhizinisi elisifanele, sabe sesinquma ukuthi njengoba vele nesimo somnotho sicikizela ngenxa yeCovid-19, kungcono sihlehle thina ebholeni.”
Previous Previous post: Umcabango wokudlala phambi kwezihlwele ezingu-90 000 yiwona owaletha uNurkovic kwiChiefs
Next Next post: IPakistan iqede ngamaProteas ngosuku lwesine